China Fiused Silica maka Refractory Ngwa Emeputa na Supplier | Dinglong
Nnukwu nkwụsi ike dị elu, mmụba volumetric dị elu na ịdị ọcha dị elu na-eme ka silica jikọtara ọnụ bụ ihe bara uru ma na-agbanwe agbanwe maka ngwa refractory, ma ọ bụ na aluminom na-asacha ya ma ọ bụ nke ndị ọzọ na-agba ume.
Obere ikuku na-eme ka mmiri jụrụ oyi
Fused silica anyị nwere ezigbo olu kwụsie ike, na-eme ka ọ dị nso net net castings. E wezụga nke ahụ, ọ bụ ihe na-arụ ọrụ nke na-arụ ọrụ nke ọma yana nke na-eme ka ọkụ na-adị ọkụ. Ọ bụ mgbe eji na-aga n'ihu mgbatị ngwa na iko na-apụta.
Dinglong na-emepụta ọtụtụ ụdị silica ngwaahịa na ngwaahịa akara ule ka o wee mezuo ihe niile achọrọ nke ngwa ngwa. A na-emepụta akara ule ngwa ngwa ọ bụla n'okpuru ọnọdụ a na-ejikwa nlezianya na-enyocha ma nyochaa n'okpuru ọnọdụ dị iche iche iji nye ndị ahịa anyị ogo na nkwụsi ike dị mkpa iji mepụta ngwaahịa na ịdị ọcha dị elu na ogo ogo ziri ezi.
A na-arụ silica ndị a maka ngwa ngwa na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ gbaara na Lianyungang, China. Site na afọ 30 nke nguzobe, Dinglong enwetala nkwado siri ike na teknụzụ ma nweta ahụmịhe dị egwu maka imepụta ezigbo quartz ihe. Anyị n'ichepụta Filiks kachasị nke kwekọrọ na ntụkwasị obi - na-enyere aka hụ na ngwaahịa na uru bara uru. Anyị kwenyere na ngwaahịa ndị a pụrụ ịdabere na ha nwere ike inyere anyị aka inweta ahịa ndị isi ma wulite ntụkwasị obi na ọbụbụenyi na ndị ahịa anyị.
Nke gara aga: Silica Fused maka Nkedo itinye ego
Osote: Silica gwakọtara